Tele RELAY တစ်ခု - Hollande က Emmanuel macron နှင့်ဆာကိုဇီအကြားနီးကပ်ရှုမြင်ဘယ်လို
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Hollande က Emmanuel macron နှင့်ဆာကိုဇီအကြားနီးကပ်ရှုမြင်ဘယ်လို
Hollande က Emmanuel macron နှင့်ဆာကိုဇီအကြားနီးကပ်ရှုမြင်ဘယ်လို
ဆာကိုဇီနှင့် Emmanuel macron Provence အတွက်မဟာမိတ်ဆင်းသက်၏ 15 နှစ်ပေါင်း၏အခါသမယတွင်, var အတွက်စိန့် Raphael မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ 75 ကြာသပတေးနေ့သြဂုတ်လရှာပါ။ အဆိုပါအမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့်သူတို့၏ဇနီးကိုလည်းတန်ဖိုးထား, အမျှအမှန်ပင်, သူ့နောက်ဆုံးထုတ်စာအုပ်ထဲတွင်ပြည်နယ်၏ယခင်ခေါင်းကိုဖော်ပြထားခြင်း ကိလေသာ။ ၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်ဆာကိုဇီသည်သူ၏ဆက်ခံသူအကြံပေးနှင့်ပင်သူမ၏, မသာရင်းနှီးစွာဖြစ်ပါသည် လက်ပတ်ချာလည် အကျပ်အတည်းအဝါရောင်အင်္ကျီပါ။
Emmanuel macron Hollande ကထက်ဆာကိုဇီနှင့်ပိုမိုအသီးအနှံများဆက်ဆံရေးမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ သူကစီးပွားရေးကိုဝန်ကြီးရွေ့လျားမှီ, Elysees မှာတုန်းကသမ္မတကသူ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်၏ခြေအောက်၌မြက်ပင်ကိုဖြတ်တောက်, သမ္မတကို run ရန်သူ၏နုတ်ထွက် 2016, သူတို့ရဲ့အထူးဆက်ဆံရေး၏အသေခံခြင်း knell တံပိုးမှုတ်သောအခါခဲ့သည်။ သမ္မတဟောင်း အကယ်စင်စစ် "အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့သစ္စဖျက်ခြင်း" ...
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကသူ့ဟောင်း foal နှင့်ဆာကိုဇီအကြား Hollande ကခုန်ရိပ် မိ. ? မှသူမ၏ဧည့်သည်တဦး၏အဆိုအရ ကမ္ဘာကြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 14 သြဂုတ်လသမ္မတဟောင်း "ဝန်ခံသည်ဒါဟာအကြံဉာဏ်သည်သူ၏နောင်တော်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဖို့ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဆာကိုဇီ Jacques Chirac နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မပြုခဲ့ ငါနားလညျနိုငျ."
ထိုအခါမှတ်တမ်းယုတ္တိနိဂုံးပိုင်း "ဆိုရှယ်လစ်အနာဂတျမှာ Emmanuel macron ၏ဆက်ခံနေဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ "ဒီအနာဂတ်ပြောပြလိမ့်မယ်။
© Jacques Witt / ရေကူးကန် / Bestimage
ဆာကိုဇီနှင့်ဆိုင်ရာ Francois Hollande က, Emmanuel macron, သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတအခါ, Reception
ပန်းရောင်စာအုပ်! အက်ရှလေဂရေဟမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ...
ကျော် 86% Ocasio Cortez များအတွက်အမေရိကန်ထောက်ခံမှုကင်ပိန်း 20202# များအတွက် Ivanka Trump Fight - ဗွီဒီယို
သင့်ရဲ့အသည်းကင်းစင်နှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ညာဘက်အစားအစာများပြီးနောက်ဖျော်ရည်သောက်ရ - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG
ခြေလျင် PSG အသင်း - PSG အသင်း: နေမာများအတွက်ငွေပေးချေမှု 40ME နှင့်ပျံ့နှံ့! ဤသည်ဘာစီလိုနာ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုပါ! - ခြေလျင် 01
မင်းသားဟယ်ရီ, Meghan Markle ငါ၏အပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုယူ - ကလူ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,062